Guddiga doorashooyinka qaranka oo u doortay guddoomiye Xaliimo (Yarey) – STAR FM SOMALIA
Kulankan ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas’uuliiin ka socotay wasaarada arrimaha gudaha iyo federalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale guddoomiye ku xigeen loogu doortay guddiga doorashooyinka Siid Cali Sheekh Maxamuud oo ka mid ah xubnaha guddiga.
Xaliimo Yareey oo ka hadashay kulanka doorashada ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in ay markale hogaamso guddi doorasho ayna si caddaalad ah dalkeeda ugu shaqeyn doonto. |
“Waxaan diyaar u ahay in aan ku hogaamiyo guddigan si cadaalad ay ku jirto waxaana aan ballanqaadayaa inaan howsha la ii xilsaaray aan si cadaaladi ay ku jirto ugu shaqeeyo dalkeyga iyo dadkayga,” ayay tiri Xaliimo Yarey oo doorashada kadib ka hadashay munaasabadaas.
Guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga madaxa banaan ee xuduudaha ayaa dhowaan waxaa ansixiyay Baarlamaanka Soomaaliyeed waxaana guddiyadan ay bilaabeen howlo dar-dar leh maadaama xilliga lagu ballamay in dalka ay doorashooyin ka dhacaan lana dhamaystiro maamulada federaalka ay isa sii gurayso.
Xaliimo Ibraahin Ismaaciil ayaa hore guddoomiye uga soo noqotay Guddigii Farsamada ee dhismaha Maamulka Galmudug, iyadoo sidoo kale soo noqotay Guddoomiyhihii Ergadii soo xulay Baarlmaaanka Federaalka Somalia.
Hase yeeshee guddiyada Doorashooyinka iyo Xuduudaha ayaa waxaa ka qaadacay Baarlamaanka Puntland waxaana illaa iyo haatan weli jira khilaaf u dhexeeya dowlada federalka iyo maamulka Puntland kaasoo salkiisu yahay dhismaha guddiyadan.